सीमा नाकामा ओमिक्रोनको त्रास : भारतबाट भित्रिनेहरू विशेष निगरानीमा Canada Nepal
क्यानाडा नेपाल मंसिर २१ २०७८
कञ्चनपुर - भारतबाट फर्किदै गरेका रोल्पाका छवि रोकामगर अरु साथीहरूसँगै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गड्डाचौकी नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कमा लामबद्ध थिए । लाइन लागेको केही समयमै उनको एन्टिजेन परीक्षण भयो । एन्टिजेनको रिपोर्ट आएपछि स्वास्थ्यकर्मीले रोकामगरलाई बोलाए र छुट्टै बस्न आग्रह गरे ।
तर, उनीसँगै आएका साथीहरू भने आफ्नो सामान बोकेर बाटो लागे । भारतमा रोजगारी गरेर घर फर्किएका ५० वर्षीय रोकामगरको कोरोना संक्रमण (एन्टिजेन रिपोर्ट पोजेटिभ) देखिएपछि स्वास्थ्यकर्मीले उपचारका लागि महाकाली अस्पताल पठाए ।
यस्तै गत बिहीबार भारतबाट फर्किदै गरेका दैलेखका २६ वर्षीया पार्वती विक र उनका ८ वर्षीय छोरा रमित विकमा पनि एन्टिजेन रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । उनीहरूलाई पनि अहिले महाकाली अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार अहिले कञ्चनपुरमा ४० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । गत महिनासम्म कोरोनाको संक्रमणदर न्यून रहे पनि पछिल्लो समय भने विस्तारै बढ्न थालेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएसँगै कञ्चनपुरको पश्चिमी नाकामा उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको छ । भारतबाट भित्रिने व्यक्तिबाट हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गड्डाचौकी र गौरीफन्टा नाकामा स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा फराकिलो पारिएको हो ।
भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको एन्टिजेन परीक्षण र खोप नलगाएकाहरूलाई नाकामै खोपको व्यवस्था गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार नाकामा पोजेटिभ देखिएकाबाट ओमिक्रोनको संक्रमण भित्रिने सक्ने भएकाले उनीहरूको स्वाब परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाउने गरिएको छ ।
ओमिक्रोनको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै नाकामा उच्च सतर्कता अपनाइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शिवराज सुनार बताए । ‘हामी कहाँ कोरोना सर्ने भनेको भारतबाट भित्रिएर हो,’ स्वास्थ्य प्रमुख सुनारले न्युज कारखानासँग भने, ‘त्यसैले नाकामा एन्टिजेन परीक्षण र खोपको व्यवस्था गरेका छौँ ।’
नाकामा परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएकाहरूलाई उच्च निगरानीमा राख्दै उनीहरूको स्वाब परीक्षणका लागि काठमाडौ पठाउने गरिएको छ ।
‘ओमिक्रोन कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट भएकाले स्वास्थ्य मान्त्रालयले नाकामा पोजेटिभ देखिएका संक्रमितको रिर्पोट मागेको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमितहरूको ओमिक्रोन परिक्षणका लागि महाकाली अस्पतालले स्वाब लिएर धनगढी प्रयोगशाला हुँदै केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाउने गरेको छ ।’ ओमिक्रोन परिक्षणको रिर्पोट नआउँदासम्म संक्रमित व्यक्तिलाई महाकाली अस्पतालको आइसोलेसनमै राखेर उपचार गरिने उनले बताए ।
भारत प्रवेशमा कडाइ
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन देखिएपछि भारतले पनि सीमा नाकामा कडाइ गरेको छ । यसरी भारत जानेहरूलाई खोप लगाएको कार्ड र परिचयपत्र अनिर्वाय गरिएको छ । भारतले कोरोना खोपको दुवै मात्रा लगाएको १५ दिनपछि मात्र नेपाली नागरिकलाई प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।
मंसिर २१, २०७८ मंगलवार १४:३५:०३ बजे : प्रकाशित
नेपालमा एकैदिन १२ हजार ८ कोरोना संक्रमित थपिए, सक्रिय संक्रमित कति ?
काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १२ हजार ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । २५ हजार ९०९ जनाको परिक्षण गर्दा मुलुकभर थप १२ हजार ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ९ लाख २७ हजार ८ सय ८८ (पीसीआर टेस्टबाट) र (एण्टीजेनबाट) १ लाख १७ हजार ७ सय ५४ पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ४० जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ८ लाख २७ हजार २ सय ७९ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै हालसम्म सक्रिय संक्रमित ८८ हजार ९ सय ३४ जना रहेका छन्।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा ८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार ६ सय ६७ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
माघ ११, २०७८ मंगलवार १७:५९:५६ बजे : प्रकाशित
काठमाडौँ - नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पत्नी सीता दाहाल अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी छिन् । कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएपछि उनलाई शुक्रबार मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि मंगलबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको हो । अस्पताले कोरोनाभाइरसको असर कम भएपछि पुन अस्पताल आउन सल्लाह दिएको छ ।
स्वास्थ्यमा कुनै पनि प्रतिकूलता देखापरे तुरुन्तै अस्पतालमा सम्पर्क गर्न सल्लाह दिइएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा राज राणाले जानकारी दिए ।
माघ ११, २०७८ मंगलवार १८:५४:३५ बजे : प्रकाशित
पूर्वमन्त्री सुनिलबहादुर थापालाई देखियो कोरोना
काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुनिलबहादुर थापालाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ ।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनले सोमबार कोरोना परिक्षण गराएका थिए । परिक्षण गर्दा उनको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
कोरोना संक्रमणपछि उनी अहिले घरमै आराम गरिरहेका छन् । उनले आफूसँग सम्पर्कमा रहेकाहरुलाई सतर्क अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
माघ ११, २०७८ मंगलवार २१:११:२५ बजे : प्रकाशित
वामदेव गौतम दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण
काठमाडौं - नेकपा एमालेका पूर्व नेता वामदेव गौतम दम्पतीलाई कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको छ । वामदेव र उनकी पत्नी तुलशा थापा गौतमलाई कोरोना संक्रमण भएको उनका छोरा हरिश दाहालले जानकारी दिएका छन् ।
‘हामीहरूको घर पनि कोरोनाबाट पीडित भएको छ । बाबा आमालाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना छ,’ हरिशले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
माघ १२, २०७८ बुधवार १०:४६:११ बजे : प्रकाशित
नेपालमा एकैदिन ८ हजार ४५४ कोरोना संक्रमित थपिए, सक्रिय संक्रमित कति ?
काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ८ हजार ४५४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । २० हजार ३५९ जनाको परिक्षण गर्दा मुलुकभर थप ८ हजार ४५४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ९ लाख ३३ हजार ४ सय ५१ (पीसीआर टेस्टबाट) र (एण्टीजेनबाट) १ लाख २० हजार ६ सय ३७ पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार ४३३ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ८ लाख ३१ हजार ७ सय १२ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै हालसम्म सक्रिय संक्रमित ९० हजार ६७ जना रहेका छन्।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार ६ सय ७२ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
माघ १२, २०७८ बुधवार १८:२७:२२ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ ।
डा. भट्टराईले आरटी पीसीआर परीक्षण गराउँदा आफ्नो रिपोर्ट पोजेटिभ आएको जानकारी दिए । कोरोना संक्रमण भएपछि डा। भट्टराई आइसोलेसनमा बसेका छन्।
सतर्कताका बाबजुद आफूलाई कोरोना संक्रमण भएका बताउदै उनले आफ्नो सम्पर्कमा आएकाहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् ।
माघ १२, २०७८ बुधवार १९:१२:१४ बजे : प्रकाशित